Taorian'ny fihibohana iray volana... | Hevitra MPANOHARIANA |
2020-04-22 @ 01:03 in Ankapobeny
Raha voasoratra fa mitohy fanintelony ny fotoan'ny hamehana ara-pahasalamana, dia saika nisalasala tamin'ilay hevitra tao anatiko tao aho. Hevitra fa tsy hanohy izany fihibohana izany intsony ny filoha. Efa manana izay nokendrena izy. Kanjo moa dia marina ihany ilay hevitro. Kisangisangy zary tenany no nanoratako ilay hoe "Deconfi...ture" tao amin'ny sata Facebook iny ny maraina mialoha ny kabary. Te-hanoratra aho hoe; "Deconfinement" nefa fandrao misy mihevitra hoe nahazo sopapa angaha aho. Tsy nanana sopapa ankoatra ny tsindrimandry aho, raha izay no ilazana azy.
Faly tokoa aho rehefa nandeha tsikelikely ilay kabary (mba nihaino indray aho... na dia tsorina fa tsy mpanaraka ilay fandaharana amin'ny iray folakandro intsony, tsy haiko ny antony fa tsy te-hanaraka fotsiny izao aho). Miresaka momba ilay artemisia annua ny filoha. Eo am-pihainoana aho dia efa mihevitra ao an-tsaiko hoe ka inona intsony moa ny ilàna fihibohana raha efa misy ary ny fanefitra? Tsy maintsy manohy ny fahamehana ny filoha ary mety tsara iny fanohizana iny ho fitandremana amin'ny tohin'ny tantara. Tsy maintsy tsinjovina ny filaminam-bahoaka.
Manaisotra tsikelikely ny fihibohana kosa indray anefa izy satria efa miharihary fa tsy ho zakan'ny olona intsony ny hanohizana izany, ary tsy mahazaka na tsy ho afaka hiantoka ny vahoaka iray manontolo izany ny firenena, indrindra fa hoe mahantra ara-toekarena izy. Mbola miaiky ny filoha (na/sy ny mpanolotsaina azy) amin'ny fomba hametrahana ny fandaminana ihany koa aho amin'ny fahaizany mametrapetraka ny zavatra rehetra. Ary mbola hiaiky amin'ny fahaizany mampiasa ny karatra eo am-pelantanany sy ny fahaizany mitady vola. Voaaisotra ihany koa ny eritreritra hihorakoraka an-dalambe raha hoe tapitra ny fihibohana.
Tsy mbola nahita mihitsy aho hatrizay ka hoe ao anaty kabary ofisialy no manolotra ampaham-pandaharana miresaka ilay artemisia ny filoham-pirenena. Hainy tsara ny resaka fifandraisana sy serasera, mipao-tsatroka amin'izany aho. Fandaharana vazaha (France24) nandeha tamin'ny taona 2017 momba ilay zavamaniry avy any Shina sy ny mitovy karazana aminy avy ao Afrika izany (Artemisia afra). Fandaharana momba ny tazo (malaria) sy ny fanefitra/fitsaboana amin'ny artemisia io fandaharana io fa somary mahavariana hoe nahoana no heverina sahady fa mety hanasitrana ny COvid-19 ilay zavatra (ny alin'ny 21 hifoha 22 avrily no nandeha feno tao amin'ny TVM io fandaharana io)?
Tao anatin'ny kabary ny filoha no nametraka fa hanomboka hiverina an-tsekoly ny ankizy mpianatra manala fanadinana ara-panjakana ka hampisotroana ilay fanafody izay hita, ary avy amin'ny tolokevitry ny filoha rahateo ny nanaovana ny fikarohana, ary nomena ny anarana hoe Covid Organics na CVO. Mbola sanganehana ihany ny ankamaroan'ny olona teo am-pendrenesana sy ny ampitson'io. Fa ny talata vao hita ho nafanavay ny fametrahana fisalasalana. Vao maika manko nampiteraka ahiahy ireo fiteny sasantsasany tao amin'ny kabary, ary tsy mbola hita na tsy mety miseho vatana ireo Manampahaizana Malagasy nahita tokoa ilay fanefitra/fitsaboana. Ny hany fototry ny olana dia ilay fanerena ny mpianatra hisotro ilay "tambavy". Tiana ampidirina ao anatin'ny fandraisana anjara ny IMRA saingy feno fiarovan-tena ny fomba fitenin'ny talen'io Orina Mpanasoa iray io. Dia ao anatin'izay savorovoron-tsaina izay aloha izao ny maro amin'ny mpiserasera fa dia ho hita eo ihany ny tohiny.